स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता भएको लेखाको ठहर, कारवाहीका लागि अख्तियार पठाइने Global TV Nepal
काठमाडौँ । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता भएको ठहर गर्दै त्यसमा संलग्न पदाधिकारीमाथि छानबिन गरी कारबाही गर्न अख्तियारलाई लेखी पठाउने निर्णय गरेको छ । शुक्रबार बसेको समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
खरिद पक्रिया नियमसंगत नभएको टुंगोमा समिति पुगेको समितिका सचिव रोजनाथ पाण्डेले जानकारी दिए ।
समितिको शुक्रबारको बैठकले स्वास्थ्य खरिद प्रक्रिया नियमसंगत नभएको ठहर गरेको छ । समितिका सचिव रोजनाथ पाण्डेले भने, ‘खरिद प्रक्रिया नियमसंगत नभएकाले यसमा जो संलग्न हुनुहुन्छ, उहाँहरु दोषी करार गर्ने अवस्था सिर्जना भएकाले कोको दोषी हुनुहुन्छ ? ककसले अनियमितता गर्नु भएको छ ? त्यो पहिचान गरेर कानुनी कारबाही गर्न अख्तियारलाई लेखी पठाउने निर्देशन भएको छ ।’
आफैंले बढाएको भाडा लागू गर्न माग गर्दै चक्रपथमा सवारी रोकेर व्यवसायीको प्रदर्शन
पिच गर्न माग गर्दै हरिसिद्धीवासीले पनि बन्द गरे सडक
शेयर साताको पहिलो दिन नै ओरालो लाग्यो
फेसबुककी सीओओ शेरिलले दिइन् राजीनामा,अब को हुनेछन् मेटाको सिओओ ?